Nyanzvi 10-1000kva Chinyararire Type Diesel jenareta Set Mugadziri uye Fekitori Zvakananga | Wako Akafanana
Zvakanakira yedu yakanyarara mhando jenareta seti
1, Iyo compact diki-diki saizi dhizaini inoderedza zvakanyanya nzvimbo yekuchengetera michina uye mutengo wekufambisa uye kubvumidzwa kwetsika. Imwe 40HQ mudziyo inogona kurongedza makumi mana seti 10-20kva jenareta sets.
2, Iyo gensets inotora pamusoro petangi tangi inova kwakakurudzira kurapwa mukati nekunze. Dhizaini yetangi yepamusoro inowirirana negiravhiti, tinogona kuona kuti pombi yemafuta inogara iine mafuta chero bedzi paine mafuta mutangi. Saka isu tinokwanisa kutanga iyo gensets nekukasira chero nguva pasina kuburitsa mweya kunze nemaoko, kunyanya inokodzera zvikamu zveATS. Iyo yemukati yakadhirowa dhizaini inogona kudzivirira tangi oirige leakage phenomenon, ita shuwa haina kumbobvira oiri idonhe.
3, Iyo wedunhu yeanodzora system inotora dhizaini yeakabatanidzwa chinongedzo. Kana iyo system ikakundikana, ingobvisa iyo yekutanga control panel, wobva watsiva iyo nyowani yekudzora pani uye ubatanidze inosanganiswa yekubatanidza. Iko hakuna kudikanwa kwekutarisa mutsetse weanodzora system imwe neumwe usati watsiva plug.
4, Yakavanzwa mhepo chinja goho inogamuchirwa kune yakasimba ikozvino kubuda; Iyo yakananga kuburitsa yemhepo switch inogona kudzivirira dambudziko remoto kubva kune yekupedzisira posvo uye yekubatanidza tambo inokonzerwa nekunyanyisa kwazvino. Yakavanzwa mhando yakasimba simba bhokisi inogona kudzivirira kuitika kwenjodzi dzekudonha mushure mekubatanidza tambo, kuvhara uye kukiya musuwo, kuti uwane kushandiswa kwakachengeteka kwemagetsi.
5, External AVR dhizaini pane kuchera mukati meyuniti kuvhura bhokisi rekuseri reimwe chinotsiva, ingovhura musuwo kutsiva AVR.
6, Zviri nyore kwazvo kuchengetedza zvikamu zveinjini humburumbira musoro uye wedzera mafuta nekugadzirwa kwemahwindo epamusoro ekugadzirisa. Saka isu hatidi kuti tipinde mujenareta seti kuti tigadzire injini, kana kubvisa iyo canopy yese.
Zvadaro: 10-1000kva Vhura Furemu Rudzi Diesel Simba Gwenya jenareta Set
MUENZANISO EP-13S EP-16S EP-20S EP-24S EP-30S EP-36S EP-50S EP-68S EP-80S EP-120S EP-200S EP-250S EP-300S
Prime Simba (KVA) 50Hz 16.25 20 25 30 37.5 45 62.5 85 100 150 250 312.5 375
Prime Simba (KVA) 60Hz 19.5 24 30 36 45 54 75 102 120 180 300 375 450
Mira-neSimba (KVA) 50Hz 17.88 22 27.5 33 41.25 49.5 68.75 93.5 110 165 275 343.75 412.5
Mira-neSimba (KVA) 60Hz 21.45 26.4 33 39.6 49.5 59.4 82.5 112.2 132 198 330 412.5 495
Simba Chinhu / COS
Saizi 1750x750x800mm 2000X850X850 2240x850x980 2500x1000x1030 2850X1100X1200 2965x1100x1350 3400x1300x1580 3600x1300x1850
Kurema 480kg 540kg 580kg 730kg 815kg 900kg 1040kg 1215kg 1480kg 1720kg 2280kg 2735kg 2865kg
Tangi Kugona 50L 50L 50L 50L 50L 70L 140L 140L 140L 140L 140L 140L 140L
Injini Brand PERKINS, CUMMINS, KUBOTA, YUCHAI, FAWDE, YANGDONG, RICARDO nezvimwe.
Alternator Brand Stamford, Marathon, Meccatle, Leroy-somer, Chinese stanford, Zvaunofarira nezvimwe.
Kudzora Panel Brand Gungwa rakadzika, ComAp, Smargen nezvimwe.
Nguva yekumhanya (p / tangi) 8 @ yakazara mutoro 6 @ yakazara mutoro 4 @ yakazara mutoro
Chimiro Rudzi MUPFUNGWA
Chikamu cheRuzha (@ 7m) 72
Certified ISO9001 EHE
Jenareta Set Spare Zvikamu Kupa